Imoto crankshaft Factory, abahlinzeki - China Imoto crankshaft Abakhiqizi
Ikhwalithi ephezulu yemoto yemoto yeToyota2RZ
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: Toyota2RZ
Umsebenzi we-crankshaft counterweight (obizwa nangokuthi i-counterweight) ukulinganisela amandla ajikelezayo we-centrifugal ne-torque yawo, futhi kwesinye isikhathi futhi angalinganisa amandla we-inertial abuyisayo ne-torque yayo. Lapho la mandla nezikhathi ezilinganisiwe ngokwazo, i-counterweight ingasetshenziswa futhi ukunciphisa umthwalo ekuthwalweni okuyinhloko. Inombolo, usayizi nokubekwa kwe-counterweight kufanele kucatshangelwe ngokuya ngezinto ezifana nenani lamasilinda wenjini, ukuhlelwa kwamasilinda nesimo se-crankshaft. I-counterweight ivame ukuhlanganiswa ne-crankshaft ngokusakaza noma ekwakheni. Isisindo senjini kadizili esisebenza ngamandla aphezulu senziwa ngokuhlukile kunosecrankshaft bese siboshelwa ndawonye.
Ikhwalithi yemoto yekhwalithi ephezulu, elungele iToyota 2RZ, ikhwalithi yasekuqaleni yefektri, iwaranti yonyaka owodwa. Uhlelo oluhle lwangemva kokuthengisa luzokunikeza usizo lobuchwepheshe.Siyakwamukela amakhasimende asekhaya nawamanye amazwe ukubuza nokuvakashela imboni yethu.